Ihostele yaseLa Aurora [Igumbi # 2]
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguYislenis
La Aurora ihostele ise kwisixeko Las tuna, ngomhla Calle Rosendo Estrada # 15 Ama, Reparto Velázquez, imizuzu nje ukusuka embindini wesixeko, kwindawo zokuhlala, kufutshane kakhulu El Cache Restaurant, El Latino Bar, i Casa KwaZul Market kunye nezinye iindawo zokuthenga, iHotele iCadillac, iHotele iLas Tunas kunye neSiteshi seBhasi.
Igumbi eline-air-conditioning eliqeshiswayo kunye nokwahlulwa, elibekwe kwinqanaba lesibini lepropati. Iibhedi zilungiswa ngamashiti acocekileyo nakhululekileyo. Igumbi lingaphakathi kwigumbi lokuhlambela labucala elinenkonzo esisigxina yamanzi ashushu. Izinto eziyimfuneko kucoceko lomntu njengesepha, ishampu, iitawuli kunye nephepha langasese nazo zibonelelwa simahla. Ibandakanya ukhuseleko lwangaphakathi. I-terrace yendlu ikuvumela ukuba ukonwabele umbono ogqwesileyo. Umnxeba wasekhaya wendlu ungasetyenziswa simahla ukwenza iminxeba yasekhaya kwaye uqhagamshelane nendawo elandelayo, inenkonzo yeWi-Fi yasimahla.
Ihostele ikwindawo yokuhlala esixekweni, ukuzola noxolo kuyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela ukuhlala kwakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Yislenis
IHostele inefoni esisigxina, i-imeyile, inkonzo ye-wifi kunye nabanini beefoni eziphathwayo, apho iindwendwe zinokunxibelelana kwaye zitshintshiselane ngalo naluphi na ulwazi oludingayo kunye nayo nayiphi na indawo yehlabathi.